Lifestyle Archives - MDY Online Knowledge
အသုဘပွဲက လူတိုင်းကို သူ့ရဲ့pre record လုပ်ထားတဲ့အသံဖိုင်နဲ့ ရယ်မောသွားအောင် စနောက်ခဲ့သေးတဲ့ ကွယ်လွန်သူအမျိုးသား အသုဘပွဲက အမှန်တကယ်ကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုပါ။သို့ပေမဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးက သူ့ရဲ့ဈာပနာအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်သူတိုင်းအား ရယ်မောခြင်းဖြင့် သူ့အသုဘပွဲကို အဆုံးသတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။သူဟာ သူ့ရဲ့အခေါင်းကို မြေမြုပ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ သူရဲ့pre record လုပ်ထားတဲ့ အသံဖိုင်ကို ဖွင့်ပေးဖို့ မိသားစုတွေကို မှာခဲ့ပါတယ်။၎င်းအသံဖိုင်ကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ရလဒ်အနေနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချစ်ရသူတွေက ငိုရင်း …
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လှည့်စားလွန်းတဲ့ onlineshop ဓာတ်ပုံထဲကမိန်းကလေးတွေ တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေက online ပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းချဖို့၊ဝိတ်ကျဆေးတွေရောင်းချဖို့ သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုနည်းမျိုးစုံ photoshop လုပ်ကာကြော်ငြာနေကြတာပါ။အထူးသဖြင့် တရုတ်ပြည်ဖက်က onlineshop ကြော်ငြာမိန်းကလေးတွေပေါ့။ တစ်ချို့တွေကလည်း တကယ့်ကိုပိန်ပြီး၊ဓာတ်ပုံထဲကလို တွယ်လျလှပနေကြတာပါ။ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြမဲ့ မိန်းကလေးရဲ့အဖြစ်ကတော့ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပြည့်ပြည့်လေးနဲ့လှပနေပေမဲ့၊သူမကိုအပြင်မှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသူတွေကတော့ လှည့်စားထားမှန်ချက်ချင်းသိလိုက်ပြီး သူမရဲ့အပြင်ကမူရင်းပုံစံကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြကာ social media ပေါ်မှာဝေမျှခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာ social media ပေါ်မှာရေပန်းစားနေလျက်ရှိပါတယ်။ 1. 2. 3. 4. …
ရေအောက်မှာ ချစ်ခွင့်ပန်နေရင်း ကံမကောင်းစွာနဲ့ ရေနစ်သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ romantic ဆန်တဲ့ ချစ်ခွင့်ပန်ခြင်းကို သူတို့ဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့နေ့လေးဖြစ်အောင် ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ သူဟာ ချစ်သူကောင်မလေးအား ရေအောက်မှာ ချစ်ခွင့်ပန်နေစဉ်အတွင်း ရေနစ်သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ဘဲ မမျှော်လင့်ထားတဲအခြေအနေတွေက ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းများအရ Steve Weber အမည်ရှိအဆိုပါအမျိုးသားနှင့်ချစ်သူကောင်မလေး Kenesha Antoine တို့ဟာ Tanzania နိုင်ငံ Pemba ကျွန်းရှိ …
မိခင်တစ်ဦးပြောပြခဲ့တဲ့ လူတိုင်းလုပ်နိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံးပိုက်ဆံစုနည်း ကျွန်တော်တို့ အများစုအတွက် ပိုက်ဆံစုခြင်းဆိုတာ စွမ်းဆောင်ဖို့ အခက်ခဲဆုံးအရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် .. ပိုက်ဆံစုဖို့တော့ လူတိုင်းကြိုးစားကြဖူးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မသုံးမဖြစ်ဆိုတဲ့ အသုံးစရိတ်တွေအတွက်ရောက ဆန္ဒမထိန်းနိုင်တဲ့ ဝယ်ချင်ခြမ်းချင်စိတ်တွေကြောင့်ရော ပိုက်ဆံစုဖို့ အိပ်မက်လေးတွေ အကောင်အထည်မပေါ်တတ်ပါဘူး။ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကလေးနှစ်ယောက်မိခင် မေရီဖရန်ကလင်လည်း အဖြစ်တူပါပဲ။ ကလေးနှစ်ယောက်ကျောင်းစရိတ်နဲ့ အိမ်စရိတ်တွေကို သေချာ လိုက်မမှတ်တော့ဘဲ သုံးမိနေရာက …
သိန်းထောင်ချီ ချမ်းသာနေတာတောင် တောင်းစားတဲ့အလုပ်ကို မရပ်နိုင်တဲ့ အမျိုးသား တချို့လူတွေကတော့ ပိုက်ဆံကို လွယ်လွယ်ကူကူ သိပ်လိုချင်တတ်ကြပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာဝါတန်ဂါပြည်နယ်က အမျိုးသားတစ်ယောက်ဆိုရင် သာမန်လူတန်းစားထက်တောင် မြင့်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ အခြေအနေရှိပေမယ့် သူတောင်းစားအလုပ်ကို လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။Legiman လို့ အမည်ရတဲ့ ၅၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားဟာ လမ်းပေါ်မှာ တောင်းရမ်းနေစဉ် အင်ဒိုအာဏာပိုင်တွေရဲ့ အိမ်ယာမဲ့နဲ့ သူဖုန်းစား ရှင်းလင်းရေး အော်ပရေးရှင်းတစ်ခုမှာ …
စေ့စပ်ပွဲ အမှတ်တရဓာတ်ပုံကို မလှလှအောင် ဉာဏ်များပြီး ရိုက်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲ မိန်းကလေးတိုင်းဟာ အပြင်မှာရော ဓာတ်ပုံထဲမှာပါ လှချင်လွန်းလှတဲ့ လူတွေချည်းပါပဲ။ ဒီလိုလှချင်တဲ့ စိတ်က ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အမှတ်တရဖြစ်မယ့် နေ့တွေမှာဆို ပိုဆိုးမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဒီလိုလှချင်တဲ့ အထဲကမှ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ အတွေးမျိုးစဉ်းစားမိတဲ့ နေရာမှာတော့ Melbourne က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ စံပါပဲ။ လက်ထပ်ခွင့် ဆိုတာဟာလည်း အခုနောက်ပိုင်း …